mairie-antananarivo – Fitokanana ny kianja Maitsoririnina
Fitokanana ny kianja Maitsoririnina
auteur 31 janoary 2017 Commentaires fermés
Tontosa ny Sabotsy faha 28 Janoary lasa teo ny fitokanana ny toeram-pialam-boly antsoina hoe « Maitsoririnina » tetsy Ankadifotsy Ankaditapaka. Tsy tanteraka izany raha tsy nisy ny fiaraha-miasa teo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny Région Ile –de- France ary ny orinasa tsy miankina iray antsoina hoe « Aokalou ».
Tonga nanotrona izany lanonana izany ny solotenan’ny Ramatoa Ben’ny tanàn’Antananarivo, ny Lehiben’ny boriboritany fahatelo Andriamatoa Rado Andriamamonjisoa, ny tompon’andraikitra ao amin’ny orinasa « Aokalou », ny lehiben’ny Institut des Métiers de la Ville na IMV ary ireo mpiara-miasa maro samihafa.
Tombony lehibe ho an’ny boriboritany fahatelo ny fanànana ity toerana fialam-boly ity satria hita ao avokoa na ny toerana voatokana ho an’ny ankizy na koa ho an’ny tanora miaraka amin’ireo kilalao isan-karazany izay fahita amin’ny toerana toy ireny.
Tao aorian’ny fandraisam-pitenenana nataon’ireo manam-pahefana dia nisy ny fiaraha-miala hetaheta narahina fampisehoana izay nataon’ny tarika « Jess Flavy One » nentina nampifalifaly ireo ankizy marobe tonga teny.
Isan’ny navohitran’ireo nandray fitenenanana ny mba hikojakojàna hatrany ny toerana tahaka izao mba ho fianarana ho an’ny hafa ary indrindra mba hisian’ny endrika kanto mandrakariva eo anivon’ny fiaraha-monina sy ny tanan’Antananarivo.